Tamboho – Madagas’Guitar : niara-nivoaka ny rakikira voalohany | NewsMada
Tamboho – Madagas’Guitar : niara-nivoaka ny rakikira voalohany
Nanao poa-droa ny Coyotte Girl Studio… Nampahafantarina, omaly, mantsy ny fivoahan’ireo rakikira roa samy hafa, an’ny tarika Tamboho sy ny Madagas’Guitar. Niara-nivoaka, saingy samihafa tanteraka ireto vokatra ireto, raha ny fampahafantarana natao.
Mirona amin’ny “vazon’ny tanàna” ny tarika Tamboho. “Fiarahan’ny gitara sy ny feo ny fototry ny tarika Tamboho. Natsangana mba hanomezana aina vaovao ireo vazo an-gitara azon’ny rehetra hatao eny rehetra eny izany”, hoy ny nambaran’i Hery Tiana. “Tamboho iray” ny lohatenin’ny rakikira, izay misy hira 9. “Samy mamorona avokoa izahay efatra mirahalahy ao anatiny. Tsy hoe niala tamin’ny tarika nisy azy akory fa nitady zavatra hafa ato anatin’ny Tamboho kosa”, hoy ny fanazavana nentin’i Tanjona.
Fampiarahana gitara, ary feon-kira ranofotsiny kosa ny an’ny Madagas’Guitar. Hira sivy izay noforonin’i Mbola Talenta sy Hery Tiana avokoa no mandrafitra ny rakikira. “Hafa tanteraka ny lalan’ny Madagas’Guitar, satria mifototra amin’izay fanehoana ny filalaovana gitara izay ny fiarahana”, hoy i Mbola Talenta.
Ao anatin’ny fampahafantarana ireto vokatra roa ireto aloha ny Tarika Tamboho sy ny Madagasc’Guitar amin’izao fotoana izao. Efa misy ny daty any amin’ny faritany, fa mbola homanina kosa ny seho eto Antananarivo. Ho fantatra tsy ho ela ny andinindininy.